तिथि मेरो पत्रु »7सरल तरिका उहाँलाई प्रेम मा गिर गर्न
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 30 2020 |2मिनेट पढ्न
त्यसैले, तपाईंले मानिसको टाउको-माथि-एडी खसेको गर्नुभएको, अब के? तल सरल कदम उहाँलाई तपाईं भन्दा पनि गहिरो गिर बनाउन मदत गर्नेछ.
सरल चरण #1: सधैं मुस्कान
सकेसम्म तपाईं सजिलो हेर्न बनाउँछ अक्सर साँचो मुस्कान फ्ल्याशिङ. तिम्रो यस अवार्ड विजेता मुस्कान आफ्नो मान्छे वा समय मा एक क्षण उद्देश्य छ कि छैन भनेर, तपाईं बारी मा आफ्नो मान्छे तपाईं संग बढी समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेछ जो सुखी बनाउन हँसिलो मदत गर्नेछ गर्न.
टिप: जब आफ्नो प्रेम आँखा सम्पर्क बनाउने, बिस्तारै यसलाई आफ्नो अनुहार माथि सबै फैलाउन अनुमति मुस्कान. एक पटक उहाँले याद, casually तुच्छ. यो तपाईं irresistible गर्नेछ.
सरल चरण #2: सर्वश्रेष्ठ तपाईं देखाउन
जो परिवर्तन, एक मानिस प्रकोप लागि एक नुस्खा छ एक्लै गरौं. त्यसैले ती हाइलाइट छैन किन हामी सबै अचम्मको व्यक्तित्व लक्षण छ? मात्र यो आफ्नो भरोसा घमण्ड गर्नेछ तर यो तपाईं थप धेरै मनमोहक आफ्नो मानिस बनाउन हुनेछ.
टिप: बस राम्रो हेर्न प्रयास. आफ्नो बाल सफा र शैलीयुक्त राख्न, एक हस्ताक्षर गन्ध पाउन, सधैं ताजा सास छ, वेयर लिपस्टिक, र निश्चित आफ्नो दराज सफा र अनुकूल छ.
सरल चरण #3: रहस्यमय हुन
क्रममा रहस्यमय र irresistible देखा पर्न, के तपाईं बारेमा सोच तपाईं मानिस छोड्न चाहनुहुन्छ.
टिप: उहाँले आफ्नो कहानी बारे सोध्छन् भने, मात्र उसलाई भन त केही विवरण मुस्कान र भन्न “म अर्को पटक सुरक्षित हुनेछ बाँकी”. साथै, उहाँलाई सम्पर्क गर्न लागि प्रतीक्षा. जब उसले गर्छ, प्रतिक्रिया निश्चित तुरुन्तै बनाउन. मात्र उहाँले तपाईंलाई सोचिरहेका गरिनेछ सम्पूर्ण समय तर पनि अन्य सबै दिन उहाँलाई dote भन्दा के गर्न कुराहरू छन् कि प्रभावित हुनेछ.
सरल चरण #4: थप चाहने सधैं उहाँलाई छोड्नुहोस्
आफ्नो मानिस थप चाहने छोडेर सधैं राम्रो विचार छ. तपाईं कुराकानी अन्त भने पहिले यो बासी र बोरिंग हुन्छ, उहाँले तुरुन्तै अर्को समय गर्न तत्पर तपाईंलाई दुई कुरा.
टिप: चाहे त्यो पाठ गर्नुपर्छ, इमेल, वा आमने-अनुहार कुराकानी मौन हुन्छ अघि कुराकानी रोक्न. साथै, बनाउन obsessively छैन उसलाई सम्पर्क गर्न निश्चित. तपाईं आफैलाई पनि उपलब्ध भने, तपाईं पनि धक्केदार देखिनेछ.
सरल चरण #5: Subtly इश्कबाज
सूक्ष्म गिर, flirtatious आशय उहाँलाई सम्बन्ध भरोसा तपाईं दुई विकसित गर्दै छन् कि पाउन मदत गर्नेछ.
टिप: कोठा मार्फत उहाँलाई देख पकडे गर्नुहोस्, आफ्नो शरीर कोण मिलाउने उहाँलाई तिर आफ्नो शरीर भाषा खुला राख्न, र जब मौका उहाँलाई जिस्क्याउ उठ्छ. साथै, आफैलाई nervously आफ्नो बाल शीर्षक वा रूपमा तपाईं उसलाई आकर्षित छन् भन्ने उहाँलाई देखाउने आफ्नो ओठ दु: ख गर्न अनुमति.
सरल चरण #6: उहाँलाई दिशा विचारशील हुनुहोस्
उहाँले गरिरहेको छ के नोटिस र उहाँले सोध्छन् अघि मदत गर्न प्रस्ताव शो. इसारा सानो राखेर, आफ्नो उदारता भन्दा बढी मोल हुनेछ.
टिप: उहाँले एक नीरस परियोजना वा बिरामी बीचमा छ कि छैन भनेर, उसलाई समय खर्च गरेर तपाईं ख्याल उहाँलाई देखाउन तपाईं सहयोग र पोषण छन् भनेर संकेत गर्छ हुनेछ.
सरल चरण #7: सकारात्मक बल आफ्नो जीवनमा हुन
कुनै अवस्था वा कुराकानी फरक सकारात्मक हुन खेलकुद आफ्नो उपस्थिति मा सकारात्मक व्यक्ति हुन. यो गनगन सधैं छ जो कसैले बनाम सकारात्मक छ जो कसैले प्रेम पर्नु गर्न धेरै सजिलो छ.
टिप: जबकि केही negativity र उजुरी ठीक छ, उहाँले न्यानो र अस्पष्ट रूपमा सँगै आफ्नो समय सम्झना त आफ्नो जीवन सकारात्मक राख्न प्रयास.
जबकि यो असम्भव छ “बनाउन” कुनै एक निश्चित तरिका महसुस, आफ्नो positivity र मायालु प्रकृति देखाउन प्रोत्साहन र सही दिशा मा आफ्नो भावना नज हुनेछ.